Ny lahatsoratra rehetra - Tononkira Malagasy - serasera.org
Ny lahatsoratra rehetra
12. Dj Rodman
Dj Rodman ; resadresaka nifanaovana taminy talohan'ny hetsika izay karakarainy amin'ny faha 31 oktobra 2009. nanangona Raozigasy 1. Oviana no nanomboka nanao DJMiarahaba ny mpitsidika ny takelaka serasera.org… More>>
11. Mami Bastah
RANAIVO Maminirina Ramiandraharisoa no tena anarako ary MAMI Bastah no anarana hoentiko amin’ny maha-mpihira ahy, ankoatry ny mozika dia Mpamboly aho . Ny gadon-kira hiangaliako dia : folk Sy “Musique… More>>
10. Tomi Dadarozy
Tomi DADAROZY no solon’anarana ahalalana an’ i RASOLOFOSON Fidy Manantsoa, monina ao Antsirabe (Madagasikara). Mpikambana ao amin’ny OMDA ( Zon’ny Mpamorona) nanomboka ny… More>>
Madagasikaraoké dia teraky ny fihaonan’i Madagasikara, sy ny fanentanana Karaoké . Tsy mijanona fotsiny amin’ny « karaoké » tsotra anefa i… More>>
Rehefa vita soa amantsara ary ny fampisehoana nataon'i Ambondrona tao amin'ny Carlton sy Antsahamanitra, herinandro 2 lasa izay, dia niroso i Kix sy ny akamany hifampizara revy indray amin'ireo mpakafy… More>>
7. Malagasy Team Kalo A Capella
MALAGASY TEAM KALO A CAPELLA Singa iray enti-maneho fihetsehana, anaty sy ivelany, ny feo. Maro ny azo ampiasàna azy, fa ny fanehoana azy ara-java-kanto no ijoroan’ny MALAGASY TEAM KALO A… More>>
6. Thiera Bruno
ANDRIAMARO THIERA BRUNO, teraka tao Antananarivo tamin’ny 1954. 1964 : Vao folo taona monja dia nanomboka niakatra an-tsehatra izy ary nanao vakodrazana tao amin’ny tranom-pokonolona… More>>
Niainga tao anatina fianakaviana mpanao zava-kanto ve ianao ? Ny raiko dia mpamoron-kira sady nanana Tarika nantsoina hoe “Ny Avoko” tamin’ny fotoan’androny. Mpitarika ny… More>>
Hantatiana Ramamonjy,teraka ny 31 oktobra 1982,dia mpihira hafa noho ny fahita satria dia vao fito taona monja dia efa niakatra an-tsehatra, 9 taona no namoaka rakikira voalohany. “La pluie,Fiderana,Faly… More>>
3. Nono Sambava
NONO SAMBAVA dia mpanakanto, mpamoron-kira, tera-tany Malagasy. Teraka tao Sambava (Faritany Avaratra-atsinanan'i Madagascar), ary izay no nahatonga azy nitondra io anarana io. Fony mbola kely izy dia… More>>
2. Tarika Damily
Tamin’ny taona 1987 no niakarako an-sehatra voalohany tao Tongobory Faritany Toliara nisy mpanakanto nandalo nanasa ahy mba hihira .Nahafalifaly ahy tokoa izany ka tsy nahatafandry mandry satria… More>>
1. "SOA FA TIA" Rakikira faharoa Fanja Andriamanantena
Taorian’ny « RAVIN-DOHATAONA », rakikirany voalohany nivoaka tamin’ny taona 2000 dia hivoaka soa aman-tsara indray ny rakikira faharoa izay nampitondrainy ny lohateny hoe «… More>>